wararka maanta 2020 | Radio Kaah
Tag: wararka maanta 2020
DF Soomaaliya oo ka jawaabtay cabashada shacabka Muqdisho
August 8, 2021 August 8, 2021 - by Editor
Ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka jawaabay cabasho ka timid shacabka ku dhaqan Muqdisho, waxayna sameeyeen howl-gal ka dhan ah dadka isticmaala maandooriyaha iyo kuwa ka ganacsada.
Heshiis laga gaaray dagaal Beeleed ka dhacay Gobolka Gedo
August 4, 2021 August 4, 2021 - by Editor
Maamulka degmada Dooloow ee gobolka Gedo iyo odayaasha dhaqanka degmadaas ayaa ku guuleestay in ay heshiis dhexdhigaan laba beelood oo waayahan ku dagaalamayay duleedka degmada Dooloow, iyada oo dagaalka ay ku dhinteen in ka badan 30 Ruux.
August 2, 2021 August 2, 2021 - by Editor
Marka la eego sida uu Cabdi Qeybdiid uga falceliyey dagaalkaas iyo shaqada uu qabtay waxaa macquul ah inay dhinaca kale ka daboosho hoos u dhicii ka dhashay sidii uu u maareeyey fursadihii ay Beesha ka heshay Dowladda Federaalka ah afartii sano ee lasoo dhaafay.
DF Soomaaliya oo war cusub kasoo saartay xiriirka KENYA
August 2, 2021 - by Editor
Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa markale ka hadlay arrimo ku aadan xiriirka haatan soo hagaagayo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo ah labo wadan oo daris ah.
Maamulka Hiiraan iyo taliska ciidanka Xoogga oo eedeyn culus u jeediyey AMISOM
Guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan, Cali Jeyte Cismaan iyo taliyaha guutada 5-aad ee qeybta 27-aad ee ciidamada Xoogga dalka oo ka hadlayey howl-gallada ka socda gobolkaasi ayaa eedeyn u jeediyey ciidamada AMISOM.